Recycler virus ကို ဘယ်လို သတ်မလဲ ? ~ ITmanHOME
01:28 Antivirus total Collection, နည်းပညာ No comments
Recycler virus ကို ဘယ်လို သတ်မလဲ ?
ဒီနေ့တော့ စိတ်ပျက်တာကို ဘေးနားမှာထားပြီးတော့ ပို့စ်လေးတစ်ခုကို ရေးလိုက်ပါတယ် . မေးတဲ့သူကတော့ များပါတယ် . အစ်ကိုရယ် recycler virus ကို ဘယ်လို သတ်မလဲတဲ့. အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်တဲ့ဖိုင်လေးကို မိမိသုံးနေတဲ့ စက်ထဲမှာ Run လိုက်ပါ . Run ပြီးတာနဲ့ ခဏစောင့်လိုက်ပါ .. အားလုံးပြီးသွားတာနဲ့ စက်ထဲမှာ လုံးဝ ဖျက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ Recycler virus ဖိုင်တွေ အကုန် ပျက်သွားတာကို ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာ တွေ့ရမှာပါ . အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
ဖြတ်ပြီးရင် Run ကိုသွားပြီး cmd လိုရေးပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။